Izilo Ezimhlophe Zesigqoko se-SEO | Martech Zone
Ama-White Hat Monsters we-SEO
NgoLwesibili, ngoJulayi 3, i-2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukubona amahlaya athile asetshenziswa kwamanye ama-infographics. Futhi kuhle kakhulu ukubona labo abasembonini bephusha imikhuba emihle ye-SEO. Ngikushilo lokho I-SEO ifile futhi le infographic ikhuluma nalokho ngokungaqondile. Iqiniso ngukuthi uma unesiteji esiqinile esiveza okuqukethwe kwakho ngokufanele, i-SEO yingxenye elula ye-equation… ingxenye enzima ukubhala okuqukethwe okuphoqayo izethameli zakho ezizokwabelana ngakho.
Le infographic evela kuSmuggecko ikhomba engxenyeni ngayinye yezakhi… izilo aka… kusu lakho le-SEO nokuthi zisebenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kusetshenziswe kangcono.
Tags: infographiclokho infographicseo siloisigqoko esimhlopheisigqoko esimhlophe seoumhlophe
Okudingwa Abathengisi Nge-HTML5
Jul 3, 2012 ngo-12: 23 PM
Ngijabulela ukubona abantu bethokozela le infographic. Benginokuzijabulisa okuningi ukukwenza. Kukhona enye esendleleni ebheka uhlangothi olubi lwe-SEO.
Jul 3, 2012 ngo-5: 06 PM
Ngibheke phambili ekuboneni okubi, futhi! Qiniseka ukuthi ungeze izilo ezidayisa i-SEO kepha zixhumanisa i-backlinking engazi iklayenti. Yilabo bafana abangishisa ngempela!
Jul 3, 2012 ngo-7: 18 PM
Ngizokwakha i-infographic ehluke ngokuphelele, ehlose ngqo ukukhetha inkampani eyi-SEO efanelekile. Kepha lokho kwenzelwa isonto elizayo 🙂
Sep 20, 2012 ngo-10: 33 PM
Ukuvezwa kohlobo oluyingqayizivele lwe-seo. ilusizo kakhulu kimi. umsebenzi omuhle.